भीमदत्त ! फरक धारको मौलिक चलचित्र । – Namaste Filmy
भीमदत्त ! फरक धारको मौलिक चलचित्र ।
गोविन्द अर्याल ।
‘मलाई नेपाली चलचित्रमा मौलिकताको विकास गर्नुछ । हिन्दी र अंग्रेजी चलचित्रको कपी गरेर चलचित्र बनाउनु छैन । मौलिक कथावस्तुले नै नेपाली दर्शकको मन जित्छ ।’ यी भनाइहरु चलचित्र नायक तथा निर्माता नवल खड्काको हो ।
यही फागुन २२ गतेबाट देशभर एकैसाथ प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘भीमदत्त’ राष्ट्रिय उहापोह र समग्र नेपाली समाजको कथामा आधारित छ । डडेलधुराका विभिन्न बस्तीमा भीमदत्तको घर, भीमदत्तका आफन्त, इतिहासविद् आदिसँग करिब २ वर्षको अनुसन्धान सकेपछि जन्मेको चलचित्र हो ‘भीमदत्त’ ।
यसअघि पनि ‘दसगजा’ चलचित्र बनाएर दर्शकको मन जित्न सफल खड्का ‘भीमदत्त’ले पनि धेरै माया पाउने आशा गर्दछन् । यस चलचित्रको अनुसन्धान गर्न सहयोग पु¥याउनुहुने हिमग्याप लामा, शिवम् अधिकारी, मणि थापा, श्रीराम पुडासैनीको योगदानलाई भुल्नै नसकिने उनी बताउँछन् ।
नेपालमा धेरै क्रान्ति भए, तर भीमदत्तको सोच र उनले खोजेको नेपाल आमाको अनुहारमा अझै उज्यालो झल्किन सकेको छैन । अझै पनि नेपाली समाजले भीमदत्तको अभाव महसुस गरिरहेको र भीमदत्तजस्ता लाखौँ व्यक्ति नेपाली आमाको मुहारमा खुसी ल्याउन अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा चलचित्रमा समावेश गरिएको छ ।
करिब १ करोड २५ लाख रूपैयाँ ‘भीमदत्त’ बनाउन खर्चिएको खड्का बताउँछन् । पहाडी गाउँको बसाइ, सुटिङ, भेषभूषाले गर्दा खर्च बढी भएको भन्छन्, उनी । यस चलचित्र डडेलधुरा, काठमाडौँ र बनारसमा सुटिङ भएको हो ।
सारांशमा कथा :
भीमदत्त न्यायपूर्ण आन्दोलन र राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताका लागि लड्ने राष्ट्रवादी नायक हुन् । उनी आफू ब्राह्मण परिवारमा जन्मेता पनि जातीय छुवाछूतविरूद्ध समाजलाई अग्रगामी दिशातिर डो¥याउने व्यक्ति, हलो क्रान्तिका योद्धा थिए । २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएता पनि त्यसबेला जनताका घरघरमा आएको थिएन । जमिनदारको शोषण, जातीय प्रथा, सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट, किसानको खेती ठूलाबडाले हडपेको देख्दा उनलाई असह्य हुन्थ्यो । त्यसपछि उनीद्वारा सशस्त्र सुरक्षा दल गठन भयो र अत्याचारीविरूद्ध त्यो दल खनियो । जनताका सामान जनतासँगै हुन थाले । त्यसपछि नेपाल सरकारले भीमदत्तलाई दमन गर्न थाल्यो । तैपनि, नेपाल सरकारले उनका अगाडि घुँडा टेक्यो । फेरि अर्को जाल बुन्यो नेपाल सरकारले । त्यसपछि उसले भीमदत्तलाई मारिछाड्यो । कसरी उनलाई मा¥यो भन्ने इतिहास बुझ्नका लागि भीमदत्त हेर्नुपर्ने हुन्छ, फागुन २२ मा । चलचित्रमा नवल खड्का, नीशा अधिकारी, सुमीना घिमिरे, रमेश बुढाथोकी, श्रीराम पुडासैनी आदि लगायतको सशक्त अभिनय देख्न पाइने छ । चलचित्र देशका विभिन्न ठाउँहरुमा च्यारिटी गर्दै दर्शकको मन जित्न सफल भइरहेको छ । चीनमा पनि नेपाली चलचित्र देखाइएको ‘भीमदत्त’ नै पहिलो हो । देश–विदेशमा गरेर करिब ६५ लाख रूपैयाँ संकलन भएको खड्का बताउँछन् । उनको चलचित्र हेरेपछि खड्कालाई राष्ट्रवादी नायकको संज्ञा दिँदै धेरै ठाउँमा नागरिक अभिनन्दनसमेत गरिसकिएकाले यस चलचित्रले नयाँ रेकर्ड राख्नेमा उनी आशावादी छन् । यो चलचित्र ६५ वर्षमाथिका सबैलाई निःशुल्क गरिनेछ ।
अहिलेको अबस्थामा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा राजकुमार राई विकल्प छैन :बिमल पौडेल
राजुले नाच्न भनेपछि 'मापसे'मा सगुन ।